संसदभवन भित्र घट्यो नमिठो घटना, सुन्दा पनि अचम्म — Imandarmedia.com
संसदभवन भित्र घट्यो नमिठो घटना, सुन्दा पनि अचम्म
काठमाडौँ। संसदभवन भित्र घट्यो अनौठो घटना घटेपछिचौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। बेलायती संसद्का एक सदस्यमाथि बेलायतको हाउस अफ कमन्समा बसेर अश्लील सामाग्री हेरेको आरोप लागेको छ।
एक बैठकमा ती सांसदमाथि उक्त आरोप लगाइएको हो। सांसदको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन्। ती सांसदको पछाडि बस्ने एक महिला मन्त्रीले सांसदले अश्लील सामाग्री हेरेको आरोप लगाएकी छिन्।
गत साता एउटा समितिको बैठकमा सो घटना भए दी टाइम्सले जनाएको छ। ती सांसदले अर्को फरक समयमा पनि अश्लिल सामाग्री हेरेको आफूले पाएको तर तस्बीर खिच्न नसकेको अर्की सांसदले गुनासो गरेकी छिन्।
सो घटनाबाट बैठकमा उपस्थित धेरै सांसदहरू स्तब्ध भएको र व्यावसायिक ठाउँमा यस्तो हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्न नसकेको कन्जरभेटिभ सांसद पाउलिन लाथमले बताइन्।
यो पनि: फकल्याण्डमा बेलायत र अर्जेन्टिनाको विवादमा भारतको प्रवेश, नेपालको पनि छ विशेष सम्बन्ध:फकल्याण्ड वा माभिनस टापु दक्षिणपश्चिम एट्लान्टिक महासागरमा अवस्थित छ। बेलायतका जनताले यसलाई फकल्याण्ड टापु भन्छन् भने अर्जेन्टिनाका मानिसहरू यसलाई माभिनास टापु भन्छन्। यो एक टापु हो जुन अझै पनि बेलायत द्वारा नियन्त्रित छ। बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच यसको सार्वभौमसत्तालाई लिएर विवाद छ । अब यो विवादमा भाजपा पनि सामेल भएको छ ।
अर्जेन्टिना सरकारले आइतबार भारतमा यो टापुमा नियन्त्रणको विषयमा बेलायतसँग वार्ता गर्न अभियान सुरु गरेको छ। यस वार्ताको उद्देश्य फकल्याण्डको विवाद समाधान गर्नु हो। यो अभियान आयोग अर्जेन्टिना सरकारद्वारा गठन गरिएको हो र यसको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव अनुसार फकल्याण्ड विवादमा बेलायतसँग वार्ता सुरु गर्नु हो।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन दुई दिनअघि भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि अर्जेन्टिनाले भारतमा यो अभियान सुरु गरेको हो । यो फकल्याण्ड्समा बेलायत र अर्जेन्टिना बीचको १९८२ को युद्धको वार्षिकोत्सव पनि थियो। अर्जेन्टिनाका विदेशमन्त्री सान्टियागो काफिरो रायसिना संवादमा सहभागी हुन भारत आएका छन् । सान्टियागोले भारतमा फकल्यान्डको बारेमा अभियान सुरु गरेका छन्।
यस अभियानको उद्घाटन समारोहमा दुई भाजपा नेताहरू पनि सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो। भाजपा प्रवक्ता साजिया इल्मी र पूर्व केन्द्रीय मन्त्री सुरेश प्रभु यस अभियानमा सदस्यको रूपमा सहभागी हुने तय थियो । तर बोरिस जोनसनको आगमनपछि भाजपा यो अभियानलाई लिएर असहज भएको बताइएको छ । पूर्व केन्द्रीय मन्त्री सुरेश प्रभु, बीजेपी नेता शाजिया इल्मी, कांग्रेस लोकसभा सांसद शशि थरुर र प्रसिद्ध शान्ति दूत तारा गान्धी भट्टाचार्य पनि अर्जेन्टिनाको यो अभियान आयोगका सदस्य छन्।
कार्यक्रममा साजिया इल्मी गएकी थिइन् तर अभियान उद्घाटन हुनुअघि नै कार्यक्रम छाडेकी थिइन् । तर शाजियाले आफू पनि उपस्थित नभएको भन्दै ट्वीट गरेकी छन् । सुरेश प्रभुको ट्विटलाई रिट्वीट गर्दै शाजिया इल्मीले लेखेकी छन्, ‘शुभकामना सुरेश भाइ! म पनि यो समारोहमा उपस्थित हुन सक्दिनँ। तयाइको भ्रमण राम्रो होस् ।’
अर्जेन्टिनाको यो अभियानमा सुरेश प्रभुले अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दूको रिपोर्टलाई रिट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘म हाल अमेरिकामा छु र यहाँका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा बोल्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार म यस समारोहको हिस्सा पनि थिइनँ।
शाजियाले इल्मीलाई सोधिएको थियो, ‘तपाईको बारेमा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ तर तपाईले नगएको ट्विट गर्नुभएको छ । आखिर किन यस्तो भयो ?’ यसको जवाफमा उनले भनिन्, ‘हो गएकी थिएँ तर म लञ्चिङ अघि नै आएकी थिएँ ।
बोरिस जोनसनको भारत भ्रमणपछि भाजपा अर्जेन्टिनाको यो अभियानबाट टाढिँदै छ कि असहज भएको छ ? यस प्रश्नको जवाफमा शाजिया इल्मीले बीबीसीलाई भनिन्, ‘भारतको अडानमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सुरेश प्रभु अमेरिकामा भएकाले जोडिन सकेनन् ।
तर, अभियान सुरु हुनुअघि नै शाजिया किन बाहिरिइन् ? यो प्रश्नको जवाफमा उनले केही भनिनन्। उनी भन्छिन्, अर्जेन्टिनाका विदेशमन्त्रीले हाम्रा विदेशमन्त्री एस जयशंकर जीलाई भेटेका छन् र भारतको अडान उनलाई अवगत गराइएको हुनुपर्छ। बोरिस जोनसन आएपछि भारतको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’
बीजेपी नेताहरु जानु थिएन भने यो आयोगको सदस्य किन बने ? के भारतको उपनिवेशवाद विरुद्धको अडान परिवर्तन हुँदैछ ? बोरिस जोनसनको भ्रमणपछि भाजपालाई यो अभियानको दबाब थियो?
यी प्रश्नको जवाफमा भारतका पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बलले बीबीसीलाई भने, आयोगको सदस्य बन्न कुनै समस्या छैन । बेलायतका सांसद र नेताहरू पनि यस्ता धेरै आयोगका सदस्य बन्छन्। तर यसले सरकारको अडान परिवर्तन गर्दैन । मेरो विचारमा भारत फकल्याण्डको विषयमा तटस्थ रहनुपर्छ । बेलायत वा अर्जेन्टिना दुवैलाई समर्थन गर्नु हुँदैन।’
उनका अनुसार जहाँसम्म औपनिवेशिकता विरुद्ध आवाज उठ्ने कुरा छ, हरेक देशले आफ्नो स्वार्थअनुसारको अडान देखाउँछ र भारतले पनि त्यही गरिरहेको छ । फकल्याण्डमा अभियानको उद्घाटन गर्दै, अर्जेन्टिनाका विदेशमन्त्रीले आइतबार भने कि भारतले परम्परागत रूपमा बेलायतसँग विवाद समाधान गर्न समर्थन गरेको छ। उनले यो पनि भने कि अर्जेन्टिना र भारतले औपनिवेशिक विरोधी सम्पदा र मूल्यहरू साझा गरे।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शशि थरुरले भनेका थिए, “भारतले बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच फकल्याण्ड्सको विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्न सहयोग गरिरहेको छ। उपनिवेशवादको अन्त्यमा भारतको भूमिका अग्रगामी रहेको छ। भारतले पनि यो विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्न समर्थन गर्छ ।
अर्जेन्टिनाका विदेशमन्त्रीले समारोहमा बेलायत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन् १९८२ को युद्धसँग सम्बन्धित दस्तावेज सार्वजनिक गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले भने कि बेलायतले युद्धको समयमा दक्षिण एटलान्टिकमा आणविक हतियारको ठूलो भण्डार जम्मा गरेको थियो। अर्जेन्टिनाका विदेशमन्त्रीले २१औँ शताब्दीमा उपनिवेशको लागि कुनै ठाउँ नभएको बताए ।
सन् १९८२ मा यस टापुको नियन्त्रणलाई लिएर बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच युद्ध भएको थियो। बेलायती सेनाले अर्जेन्टिनाको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। अर्जेन्टिनाले भने यो टापुमा आफ्नो अधिकार भएको दावी गर्छ किनकि यो टापु १८०० को शताब्दीमा स्पेनिश साम्राज्यको हिस्सा थियो। यसबाहेक अर्जेन्टिनाले ल्याटिन अमेरिकी मुख्य भूमिसँग निकटताको हवाला दिँदै यसमाथि आफ्नो पनि दाबी गर्छ।
बेलायतले लामो समयदेखि आफ्नो प्रशासन र यसका नागरिकहरू ब्रिटिश भएको तर्क गर्दै आएको छ। यस टापुमा तीव्र हावा चलिरहन्छ र रूखहरू नगण्य छन्। पूर्वी र पश्चिम फकल्याण्ड दुई महत्त्वपूर्ण टापुहरू हुन्। यसबाहेक सयौं साना टापुहरू छन्। टापु स्वायत्त छ तर बेलायतले यसको विदेश मामिला र रक्षा मामिला हेर्छ। यो टापुमा दलीय राजनीति छैन। जनवरी १, २००९ मा यहाँ नयाँ संविधान लागू भयो, जसमा कार्यकारी परिषद्लाई थप अधिकार दिइएको थियो।
यो टापुसँग नेपालको पनि खास सम्बन्ध छ। खासमा १९८२ मा जब अर्जेन्टिनाले यो टापुमा आक्रमण गरेको थियो त्यतिबेला बेलायती सेनाको तर्फबाट गोर्खालीहरूले यहाँ युद्ध लडेका थिए। यहाँ सातौं गोर्खा राइफल्सको पहिलो बटालियनका सैनिकले युद्ध लडेका थिए। यसमा १ जना गोर्खालीले ज्यान समेत गुमाएका थिए। सातौं गोर्खा राइफल्स ड्युक अफ एडिनबराको मातहत रहन्छ। यो युद्धको समय ड्युक अफ एडिनबरा महारानी एलिजाबेथका दिवंगत पति राजकुमार फिलिप थिए।